Apple na-ekenye isi ụlọ ọrụ ya na Cambridge na mmepe kpụ ọkụ n'ọnụ nke Siri | Esi m mac
Apple na-ekenye isi ụlọ ọrụ Cambridge maka mmepe siri ike Siri
Ruo ugbu a Apple ekwughị banyere isi ụlọ ọrụ ya na Cambridge. A nụrụ asịrị nke ụlọ ọrụ VocallQ na October 2015, mana enweghị nkwukọrịta siri ike. Site taa, akara ngosi Apple dị na facade nke ụlọ ahụ. Ọ dị egwu na akara apụl dị ọcha, ọbụlagodi na ụlọ ahịa ndị ika ahụ. Oge a apụl na-acha acha anụnụ anụnụ, nke na-egosi ihe dị iche.
O doro anya Apple ga-ekenye ụlọ ahụ na 90 Hills Road maka nyocha na mmepe yana nke ọma na ntinye nke Siri, ọ bụ ezie na ekwenyeghị na ebe a. Ugboro Ọ ga-abụ enyemaka ma ọ bụ ngalaba dabere na Mahadum Cambridge, onye nzube ya bụ nhazi asụsụ ebumpụta ụwa. Ọ bụ otuto ya na anyị hụrụ nkwado na General Motors na ọrụ nkwupụta okwu. Apple zụta 2015 gosipụtara na ọ ruru $ 100 nde. Isi ụlọ ọrụ Cambridge, nke nwere ihe karịrị mita 2.500, ga-enwe ala abụọ ma ga-anabata ndị ọrụ 30 sitere na Apple na ụlọ ọrụ mpaghara.
Isi ihe dị na Apple zụrụ bụ eziokwu na nhọta olu by Onyeka Onwenu Nnwale ndị ahụ nwere 90% mmeri, ma e jiri ya tụnyere 20% maka Siri.
Na-adịbeghị anya ọnwa anyị achọpụtala a ọzọ ụma nkwado si Apple ya nnyemaaka, ọzọ ma ọ bụrụ na o kwere omume na Nkwupụta doro anya nke Tim Cook maka ọgụgụ isi, onye isi ya kwesịrị ịbụ Siri. Ihe nlere site na ụlọ ọrụ maka teknụzụ ọhụrụ a dị na mkpakọrịta na mbipụta dị iche iche.
Apple nwere ike ịchọrọ ịkọwa ụlọ ya dị iche na njirimara na ọnụ ụzọ. N'ụzọ dị otú a, onye ọbịa nwere ike ịma ihe ga-eme n'ime. Dịka ọmụmaatụ: ọcha bụ maka Storelọ ahịa, acha anụnụ anụnụ maka ụlọ nyocha, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka mmepụta ume. Anyị ga-ahụ otu ị ga-esi bịaruo okwu a n'ọnwa na-abịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple na-ekenye isi ụlọ ọrụ Cambridge maka mmepe siri ike Siri
Apple na-emegide iwu Trump na-emebi nchedo maka ụmụ akwụkwọ transgender
iExtract Plus, n'efu maka obere oge